2 Eray Oo Uu Xasan Dahir Adeegsaday Balse Mareykan Cabsi Ku Beeray | Xaqiiqonews
2 Eray Oo Uu Xasan Dahir Adeegsaday Balse Mareykan Cabsi Ku Beeray
Ka dib dilkii Cabdul qaadir Kumaandoos, Sh. Xasan Daahir Aweys ayaa xabsiga dhaxdiida iskaga soo duubay muuqaal uu ugu baroor diiqaayo dilkii saaxibkiis.
XAQIIQ NEWS- WARARKA GUDAHA
Diyaarad drone ah ayaa duqeyn ku dishay Cabdul Qaadir Kumaandoos oo mar soo noqday asaasihii ururkii “Jabhadul Islaamiya”, ururkaasi oo markii dambe ku biiray Xisbul Islaam oo ugu dambeyn Al-shabaab ka mid noqday.
Duqeynta ayaa ka dhacday degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe, wararka ayaana sheegaya in Kumaandoos uu beryihii dambe ahaa bukaan socod la xanuunsan cudurka sokorta noociisa labaad, shaqada uu Alshabaab dhaxdiida ka haayey ayaana ku koobneyd “dacwada”.
Sidoo Kale Aqri..Xisaab Ahaan Imisa Ayuu Qaadan Karaa Dagaalka Al-shabaab iyo Mareykanka?
Waa Kuma Cabdi Qaadir Kumaandoos?
Cabdi Qaadir Kumaandoos waxaa uu ahaa sarkaal ka tirsanaa Kumaandooskii Soomaaliya ee Dowladii Kacaanka, ka dib burburkii Kacaanka Kumaandoos waxa uu ku jiray saraakiishii aasaastay ururkii jahaadiga ahaa ee burburay kaasi oo lagu magacaabi jiray “al -itixaad”.
Xilligii Maxkmadahii Islaamiga Kumaandoos ayaa qeyb ka ahaa dagaaladii “muqaawamada” kuwaasi oo lagala soo horjeeday joogitaankii ciidanka Itoobiya ee Gudaha Soomaaliya.
Dadkii yaqaanay waxa ay ku sheegeen Kumaandoos nin noolashiisa oo dhan “dagaal u hibeeyey”, waligiisna ma guursan.
Mareykanka Maxuu Ka Cabsanayaa?
Xasan Daahir Aweys oo xabsi guri ugu jira DF-ka ayaa iska duubay muuqaal uu ugu “calaacalaayo” saaxibkiis Kumaandoos, Xasan Aweys ayaa Kumaandoos ku tilmaamay “Soomaali, Soomaali ay soo barbaariyeen, Soomaali u adeegay, dilkiisuna ay Soomaali oo dhan ka xanuunsaneyso”.
Xasan Daahir Aweys- waxa uu hadalkiisa u muuqday “tacsi”, laakiin Mareykanka waxa ay u arkeen “Hanjbaad”, sida lagu daabacay Webseetka Ameerikaanka ah ee “National interest”, oo sheegay in Xasan Daahir Aweys uu yahay cabsi nool oo ka dhan ah waxa ay ku magacaabeen “Danaha Mareykanka”.
Waxaan Duqeyn Ku Dileynaa Fahad Yaasiin!
Webseetka Ameerikaanka ee “National interest” ayaa Soomaaliya ku tilmaamay meel muhiim ah oo laga bilaabi karo olalaha Madaxweynaha Trump ee ah “qashinka Mareykanka Dhibaayo ha laga hor qaado” (Wipe out global terrorists who threaten to harm Americans.).
Wargeyska ayaa xusay Fahad Yaasiin oo ka tirsan “sirdoonka Soomaaliya”, iyaga oo ku tilmaamay mid dhib ku ah danaha Mareykanka ee Soomaaliya, muhiimna ay tahay in Mareykanka uu iska hor wareejiyo.
Mareykanka ayaa Soomaaliya ka fuliyo duqeymo ka dhan ah dadka ay u arkaan in ay lid ku yihiin danaha Mareykanka, waxa ayna u muuqataa in liiska uu sii balaaranaayo, hase ahaatee Df-ka waxa ay ku jirtaa “aamusnaan dheer”.
Dowladdu Maxaa Ku dhacay?
Df-ka Soomaaliya waxa ay badana raacdaa qaacidada ah “Af daboolan waa dahab”, taasi oo iyadu lafteeda aan xumeyn laakiin marka ay arintu taagantahay gudaha Soomaaliya waxa aan u baahanahay “carrab dheer”., markii aan fiiriyey aamuska dheer ee Df-ka waxaan qiyaasay seddex midood.
-Dowladdu Wey xishood badan tahay- haa dadka xishoodka badan waa dhageystayaal fiican, sababtoo ah waxa ay la’yihiin kalsoonida hadalka.
-Dowladdu Waa Dambeysaa- Df-ka Soomaaliya waxaaa dhici kartaa in aysan joogin qarniga 21,aad, waxaana u maleynaa in ay ku fikireysa lahaanshaha Nukliyeer iyo awood ciidan si ay u “hadasho oo kaliya”.
Dowladdu ma ahan Dowlad- sida caadiga dowlad walbo iyada ayaa ka mas’uul dadkeeda masu’uuliyinteeda, shacabkeeda, mucaaradkeed kan hubeysan iyo kan kalaba, sidaa darteed dowladda hadii aysan awoodin in ay intaasi ka soo baxdo waxa ay u muuqataa in aysan dowlad caadi ah aheyn, waxaa jira kara wax kale oo naga qarsoon.
Qarnigan aynu ku jirno uma baahnid Nukliyeer, diyaaro dagaal iyo saanad hub, waa qarniga “afka iyo carrabka”, akhiyaarey waxa ay ila tahay in aan u baahanahay mas’uuliyiin af-dheer.